IPhone reset factory, ahoana ny famerenana iPhone? | Avy amin'ny mac aho
Mamerina ny iPhone
Te hamerina amin'ny laoniny ny iPhone amin'ny orinasa ianao? Indraindray ilaina ny hamafana ny atiny rehetra, angona ary fampahalalana amin'ny ankapobeny izay notehirizinay tao amin'ny iPhone na iPad. Angamba satria hivarotra an'io isika, angamba satria mila avelantsika any amin'ny serivisy teknika izany, na izany na tsy izany, asehonay anao anio fomba roa hamafana ireo toe-javatra sy data ao amin'ny iPhone, iPad na iPod Touch ary avelao araka ny nahitanay azy tamin'ny andro nanesorantsika azy tao anaty boaty.
1 Fafao ny iPhone sy ny toe-javatra avy amin'ilay fitaovana
2 Hamafana ny atiny sy ny fikirana amin'ny alàlan'ny iTunes
3 Fafao ny iPhone amin'ny iCloud
4 Avereno ny iPhone tsy misy iTunes mampiasa dr.fone Eraser
Fafao ny iPhone sy ny toe-javatra avy amin'ilay fitaovana
Araka ny efa nampoizinay, misy fomba roa handaozana ny iPhone na ny iPad "ho vaovao", ny iray amin'izy ireo dia hamela antsika hamafa ny iPhone amin'ny alàlan'ny fanovana ny terminal mihitsy ary noho izany dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Manaova backup amin'ny iCloud na iTunes.
Vonoy ny fisehoana "Find My iPhone".
Mandehana any amin'ny Settings → General → Reset.
Safidio ny "Fafao ny atiny sy ny toerana misy anao" ary, raha nampandeha kaody hamaha ianao dia hangataka anao hiditra ao.
Tsindrio ny "Delete iPhone" amin'ny hafatra fampitandremana izay hiseho etsy ambany.
Hafatra fampitandremana vaovao no hangataka anao hanamafy ny fandidiana.
VONONA! Afaka minitra vitsy dia hamafana ny iPhone ianao ary hanjavona avy ao amin'ny iPhone na iPad anao ny atiny sy ny toerana ary ho toy ny andro voalohany nanesoranao azy tamin'ny fonosany.
Inona no hatao raha tsy mahatsapa kapila mafy ivelany ny Mac-nao
Hamafana ny atiny sy ny fikirana amin'ny alàlan'ny iTunes
Ny fomba faharoa koa dia hamafa ny atiny rehetra sy ny fikirakirana ny iDevice avelanao any amin'ny fanjakan'ny orinasa. Mba hanaovana izany dia araho ireto fihetsika manaraka ireto:
Sokafy ny iTunes ary ampifandraiso amin'ny alàlan'ny tariby USB ny fitaovanao.
Alefaso amin'ny iTunes ny fividiananao rehetra amin'ny alàlan'ny menio File → Fividianana fividianana
Manaova backup amin'ny iPhone na iPad amin'ny iCloud na iTunes.
Tadiavo ny iPhone, iPad na iPod Touch anao ary, ao amin'ny tabilao «Famintinana», kitiho ny «Ampodio iPhone».
Hisy hafatra iray hanontany raha te-hamerina ilay fitaovana ianao, saingy, tahaka ny efa nataontsika teo aloha, afaka manohy ny fizotrany izahay.
Hisy hafatra fampitandremana vaovao: Azonao antoka ve fa hamerina ny iPhone "anarana iPhone" amin'ny toeran'ny ozininao ianao? Hofafana avokoa ny angon-drakitrao. Ekeo ary tohizo.
Avy eo dia mila miandry fotsiny ianao. iTunes dia hampidina ny rindrambaiko iOS farany indrindra, hamafa ny atiny sy ny toerana rehetra ary hamela ny fitaovanao ho andro voalohany. Raha vantany vao miseho eo amin'ny efijeryo ny iPhone na ny iPad dia mila esorinao fotsiny ilay izy amin'ny solosaina ary voila! Afaka mamonjy ny fitaovanao tsy misy tahotra ianao
Safidy handefasana sary avy amin'ny fitaovana Android mankany amin'ny Mac
Fafao ny iPhone amin'ny iCloud
Amin'ny tranga hypothètical sy mahafaty izay very ny iPhone na iPad anao na, ratsy kokoa noho izany, nangalatra, azonao atao ihany koa hamafa izay rehetra ao anatiny sy ny fikirana rehetra lavitra mampiasa iCloud. Amin'izany fomba izany dia hiantohana amin'ny antoka bebe kokoa ianao fa tsy misy olona afaka miditra amin'ny fitaovanao.
Ny fepetra mialoha ahafahanao mamafa ny iPhone avy amin'ny iCloud dia ny nandefasanao ilay safidy teo aloha "Karohy ny findaiko" noho izany, raha nahatratra an'ity teboka ity ianao nefa tsy namoy ny fitaovana ampiasainao, dia manoro hevitra anao izahay mba hanao izany avy hatrany. Mba hanaovana izany dia sokafy fotsiny ny app Settings ary safidio ny ID Apple anao eo ambony, kitiho ny iCloud à Find my iPhone, ary araho ny torolalana.
Etsy ankilany, mety ihany koa fa, alohan'ny hamafana ny atiny sy ny fikirana ao amin'ny iPhone dia manandrana ianao mitadiava azy amin'ny alàlan'ny fampiharana "Search" amin'ny fitaovana iOS hafa mifandraika aminao Apple ID, na avy amin'ny tranonkala icloud.com. Azonao atao ihany koa ny mampandeha feo ilay fitaovana, fantatrao, satria indraindray dia mitsofoka eo anelanelan'ny sezaky ny sofa izy ary tsy fantatsika akory. Lavitra, vantany vao mamafa ny iPhone ianao dia tsy ho hitanao intsony amin'ny fomba rehetraNoho izany, alohan'ny reraky ny safidy rehetra.
Ary ankehitriny eny, raha vantany vao azonao antoka fa tsy azo atao ny mahita ny fitaovanao, ary amin'ny tahotra sao hianjera amin'ny tanan'olon-kafa, dia izao ny fotoana hamafa ny iPhone amin'ny iCloud. Mba hanaovana izany dia araho ireto torolàlana manaraka ireto, ho hitanao fa tena tsotra izany:
Midira tranokala iCloud amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mari-pahaizana momba ny ID Apple anao. Aza adino fa tsy maintsy mpampiasa mitovy amin'ilay iPhone tianao hamafa izy io.
Eo an-tampony, kitiho ny toerana misy azy hoe "Fitaovana rehetra" ary safidio ilay fitaovana tianao hamafana.
Ankehitriny, eo am-baravarankely fampandrenesana an'io fitaovana io, kitiho ny "Delete iPhone", safidy iray voafaritra amin'ny fanaovana sarina fitoeram-pako.
Avy eo, ampidiro ny Apple ID anao sy ny fampahalalana angatahina hanamarina ny maha-ianao anao: valio ny fanontaniana fiarovana na ampidiro ny kaody fanamarinana izay ho azonao amin'ny fitaovanao hafa raha toa ka tsy mampiasa tranokala azo itokisana ianao.
Vantany vao nahavita ireo dingana etsy ambony ianao, hamafana lavitra ny iPhone-nao avy hatrany raha mifandray ilay fitaovana na, raha tsy izany, amin'ny manaraka dia mifandray.
Ah! Ary raha aorian'izany hitanao izany dia azonao atao avereno ny backup farany nataonao tamin'ny iCloud na iTunes.
Avereno ny iPhone tsy misy iTunes mampiasa dr.fone Eraser
Raha mila mamerina ny iPhone ianao nefa tsy manana fampiharana iTunes dia azonao atao ihany koa izany noho ny fampiharana dr.fone. Raha te hanao izany dia mila misintona ilay fampiharana fotsiny isika, tsindrio ny menio Draft ary kitiho ny "Delete Delete Data ". Aorian'ny minitra vitsy dia hadio tanteraka amin'ny angon-drakitrao manokana ny iPhone-nao. Raha te-hisintona an'ity fampiharana ity ianao ary hahita ny fizotrany rehetra hamafana ny angona avy amin'ny iPhone mila tsindrio fotsiny eto.
Aza adino fa afaka mahita torohevitra, tetika ary torolàlana maro hafa ho an'ny fitaovanao Apple ianao ao amin'ny faritra misy anay Tutorials.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPad » Mamerina ny iPhone
Majori dia hoy izy:
Nataoko tamin'ny telefaona izany ary maharitra ora maro, tsy fantatro izay mitranga uu
Valiny tamin'i Mayori
Toy izany koa no mitranga amiko !! Miaraka amin'ny paoma mahodina sy maty aho ... nandeha ve izany tamin'ny farany?
Valiny tamin'i Jesica
Salama, fangatahana hamerenana azy io amin'ny orinasa dia ilaina ve ny manana ilay karatra sim? Ny iray mividy iray efa niasa
Mamaly an'i roxy
Paul DePaoli dia hoy izy:
Dingana hamahana olana goavana amin'ny ipad 2: (oh. Hang eo am-panombohana, tsy hirehitra, aorian'ny famoahana ny fanavaozana OS dia tsy mamaly)
1 - Famerenana mafy: tsindrio ny bokotra an-trano sy ny bokotra fanidiana miaraka amin'izay mandra-pihaviny ary hiseho indray ny paoma paoma.
2 - Hamarino tsara fa manana fiampangana ny iPad (avelao izy hametahana adiny iray farafahakeliny) ary andramo indray ny dingana 1.
3 - Ampidino ny iTunes (application apple) mampifandray ny ipad amin'ny pc, sokafy ny iTunes ary andramo havaozina ny rafitra fiasa. Raha misy antony tsy avelany hampifanaraka antsika iTunes amin'ny iPad-tsika, tazony ny bokotra an-trano ary vonoy mandra-pisehon'ny kisary iTunes eo amin'ny iPad (miseho aorian'ny paoma) 15 segondra eo ho eo. Safidio ny safidy hanavao ny lozisialy amin'ny alàlan'ny iTunes, ity dia hampidina ny rafitra fandefasana amin'ny pc ary andramo ny manavao azy raha toa ka tsy mandeha ity fomba famerenana 3 ity ary safidio ny safidy hamerenana amin'ny soatoavin'ny orinasa (ho very ny fampahalalana rehetra)
Manantena aho fa manampy anao izany!
Valiny tamin'i Pablo Depaoli
dingana iray, ny zavatra farany angatahiny aminao dia ny teny miafin'ny kaonty ithunes
erick david mahatoky dia hoy izy:
Te hamerina amin'ny laoniny ny iPhone 4 avy amin'ny fikirakirana aho, tsy inona akory fa ny nangataka tenimiafina icloud ahy, ny olana tsy tadidiko ny teny miafiko ... ankehitriny te-hanao izany avy amin'ny iTunes aho, hitranga ve izany? inona no hitranga amin'ny kaontiko icloud? Tsy hanana olana aho aorian'izay satria hitako fa maro no sendra kaody code Error ... Misaotra
Valiny tamin'i Erick David Leal
mariafabiola dia hoy izy:
Niezaka nanetsiketsika iPhone 5 izy, niditra tao amin'ny Apple ID aho fa avy eo nangataka anarana mpisera EMHS NOC sy tenimiafiko aho. INONA IZANY? Ahoana no hataoko
Valiny tamin'i Mariafabiola
Tania dia hoy izy:
Te hamerina amin'ny laoniny ny iPhone aho, saingy ny kaody 6-voalohany voalohany ihany no fantatro, avy eo mangataka amiko kaody 4-digit izay tsy tadidiko hoe iza.
Handeha hanandrana ny andrana aho 9 .. raha tsy fantatro ireo tarehimarika 4 ireo, inona no hataoko? VONJEO !!!!
Mamaly an'i Tania
Rafael ramirez dia hoy izy:
Nametraka anarana sy tenimiafina ny zafikeliko izay tsy tadidiny ny famerenana amin'ny laoniny ny orinasa iPhone, azafady mba misaotra
Valiny tamin'i Rafael Ramirez
Te hanana ny mailaka sy ny teny miafina aho satria nivarotra hetra nangalarina tamiko izy ireo. Ampianaro azafady
Mampalahelo fa raha amidy amina fitaovana Apple mifandraika amina ID ianao dia tsy ho hainao ny mamerina azy io, mba hisorohana ny tranga toa anao. Miala tsiny 🙁
Manana 5s sy roa 5c aho izay tiako homena fampiasana hafa. Ny olana dia ireo telo ireo dia ampifanarahana amin'ny kaonty iCloud iray ihany ary amin'ny tranga naoty na fifandraisana, izay ataoko amin'ny iray, dia ataony amin'ny roa hafa. Ny 5c ihany no tadiaviko fa tsy ny 5. Raha misy afaka manampy ahy azafady
M.Angeles dia hoy izy:
Rehefa nomeko hamafana izany ary aorian'ny fampitandremana dia hitako fa misy lesoka amin'ny ID, inona no tokony hataoko amin'izany?
Valiny tamin'i M.Ángeles
Ny fotoana mety indrindra hividianana Mac dia izao
Apple dia namoaka fanambarana vaovao momba ny andiany Carpook Karaoke vaovao